Khuphela iincwadi ngokusemthethweni | Uncwadi lwangoku
Ukuba ufuna khuphela iincwadi ngokusemthethweni Kungenxa yokuba ngokwezoqoqosho awunakukwazi ukuzithenga okanye ngenxa yokuba ukhetha ukuzigcina kwi-ebook yakho, kwezi ndawo unokuzenza ngokukhuselekileyo nangokusemthethweni ngokupheleleyo. Zizinto zokubhala okanye iiwebhusayithi ezinikezela ngeencwadi zasimahla kunye nezinye iincwadi ezihlawulelweyo kwiikhathalogu zabo. Intloko phezu kwabo kwaye ujonge kubo.
Iincwadi ezikhutshiweyo ngo-3, 2, 1… Ngoku!
Indlu yeencwadiIvenkile ethandwa kakhulu kwilizwe lethu apho sinokufumana khona zonke iintlobo zeencwadi kuzo zonke izihloko ezinokubakho. Phakathi kwazo inekhathalogu ebanzi yeencwadi ezisimahla.
IsicwangcisoLibro.netKweli qonga uza kufumana ikhathalogu yeencwadi ezikhululekileyo ezingaphezu kwe-9.000 onokuzikhuphela ngokusemthethweni. Uya kufumana iincwadi ezinje "INkosana encinci" o "UAlice kwiWonderland". Uyilo lwayo alunabunkunkqele konke konke kodwa ingaphezulu kokufezekisa umsebenzi wayo: ikhuselekile ngokupheleleyo kwaye ikhuphela incwadi esemthethweni.
Amakhulu amaqandaInto eyenziwa yile webhusayithi ilungile ngakumbi kubabhali beencwadi. Isebenza ngolu hlobo lulandelayo: ine-esweni ebeka iincwadi ezipapashwe simahla kwiAmazon ngababhali bazo. Oku kubek 'esweni kuyasiqinisekisa ukuba iincwadi ezifumanekayo azizizo iikopi kwaye zinokukhutshelwa simahla ngqo kumbhali.
Google Books: Ngamanye amaxesha siyalibala ukuba uGoogle ungaphezulu kwento yokukhangela. Iincwadi zikaGoogle zisinika usetyenziso olusebenzayo nolumangalisayo lweselfowuni inani elikhulu leencwadi zasimahla (kukho ezihlawulelweyo) esinokuzikhuphelela kwaye sibe nazo kwisixhobo sethu ukuze sizifikelele naphi na nangaliphi na ixesha.
IGutenberg: Ukuba kukho into elungileyo malunga nale webhusayithi kukuba ukongeza kwiincwadi zokukhuphela simahla kwiSpanish, uya kufumana ezinye iilwimi (ezilungele abo bafunda ulwimi lwesibini). Uyilo lwayo, olufana kakhulu neWikipedia, lusivumela ukuba sikhuphele ngaphandle iintlobo ngeentlobo zeencwadi zasimahla kwiilwimi ezahlukeneyo ukuze sikwazi ukufunda ngesiJamani, isiNgesi, isiFrentshi okanye isiTaliyane, ukongeza kwiSpanish, ngokucacileyo.
Iincwadi: Eli liqonga apho ababhali bengaziwa kakuhle. Banokupapasha imisebenzi okanye iiprojekthi zabo simahla. Abanye babo banikezela ngeencwadi zabo simahla (abanye bahlawulwa), bekwazi ukuzikhuphela kwifomathi yePDF okanye nakweyiphi na enye ifayile ehambelana nomfundi wakho.
Lektu: Le portal yewebhu ibonelela ngeencwadi ezihlawulelwayo nezasimahla. Iimpawu zayo ezibalaseleyo: Zonke iincwadi zikwiSpanish kwaye uya kufumana neencwadi zokumamela- Unokuzikhuphelela ezi ncwadi usebenzisa iakhawunti yakho ye-Facebook, ye-Twitter okanye kaGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Khuphela iincwadi ngokusemthethweni
UDavid gonzalez sitsho
Ithala leencwadi lase-Ayacucho lalilahlekile
Phendula kuDavid González
IRiphabhlikhi yeWeimar ibonwe kumdlalo ohlekisayo